Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Yekutanga New COVID-19 Oral Kurapa Yakagamuchirwa neCanada
Nhasi, Honourable Filomena Tassi, Gurukota rePublic Services and Procurement, vazivisa kuti Hurumende yeCanada yatambira kutumira zviuru makumi matatu nemazana mana emakosi ekurapa ePfizer's COVID-30,400 oral antiviral treatment, PAXLOVID TM, aine zviuru zana nemakumi maviri zvinotarisirwa kuunzwa kubva zvino kusvika. kupera kwaMarch. Kurapwa kwakawana mvumo yekutonga yeHealth Canada pakutanga nhasi.
Hurumende yeCanada yakazvipira kuchengetedza hutano nekuchengetedzeka kwemunhu wese muCanada kubva kuCOVID 19. Izvi zvinosanganisira kuwana marapiro akachengeteka uye anoshanda sezvaanowanikwa.
Kudzivirira uye matanho ehutano hweveruzhinji anoramba ari nzira yakanakisa yekudzivirira veruzhinji kubva kuhutachiona uye chirwere chakakomba. Nekudaro, kuwana kune anoshanda, ari nyore-kushandisa marapirwo, senge akagadzirwa nePfizer, anogona kuve akakosha kudzikisa hukasha hweCCIDID-19 muvanhu vanotapukirwa.
Kugoverwa kumatunhu nematunhu kuchatanga nekukasika. Hurumende yeCanada iri kushanda pamwe chete nematunhu nematunhu kuronga kugoverwa kwemakosi ekurapa munyika yose. Public Health Agency yeCanada yakasangana nevakuru vematunhu nematunhu kuti vakurukure nezvekuendesa mauto zvichibva pahwaro hwemunhu negadziridzo nekuda kwezvinodikanwa zvekutakura kubva kuPfizer.
Canada yakawana miriyoni imwe makosi ekurapa. Zvirongwa zvekutumira zviri kupedzwa, nechinangwa chekuunza mamwe makosi ekurapa kuCanada nekukurumidza sezvinobvira.
Kanadha Covid Covid-19 hurumende utano
New Clinical Investigation Yakatenderwa Kurapwa kweEarly-Stage Parkinson's chirwere
Cunard Inoshuma Zuva Rokubhodha Rakanyanya Mumakore Gumi
Spirit Airlines inosimbisa kutambirwa kwevasina kukumbirwa...